Hotspot Shield Crack 2021 - Fampidinana Lakile Maimaim-Poana
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Hotspot Shield Crack
Nahoana no malaza be ny Hotspot Shield Crack? Navoaka tamin'ny 2005 izy io ary lasa iray amin'ireo malaza sy azo atokisana indrindra Serivisy VPN. Mora ampiasaina, haingana ary manana mpizara manerana an'izao tontolo izao.
Hotspot Shield maimaim-poana
Ny Hotspot Shield dia manana mpizara marobe ahafahan'ny mpampiasa mahazo fidirana haingam-pandeha amin'ny atiny manerantany. Raha vantany vao mifandray ianao, ny serivisy dia mahita ny mpizara VPN optimum. Na izany aza, ny mpampiasa dia afaka misafidy safidy mahaleo tena sy mamaritra ny firenena tian'ilay mpizara. Fantsom-pifandraisana tsy manam-petra sy Transparent Performance Enhancing Proxy (TPEP) dia mamela ny tsy firaharahana ny fahaverezan'ny kitapom-baovao tsy nahy ary hampihena ny fahataran'ny fifandraisana vaovao.
Tranonkala tsy mihidy
Ny kolejy, famakiam-boky ary birao mazàna dia mametra ny fidirana amin'ireo sehatra media sosialy toy ny Facebook, YouTube, ary Twitter. Miaraka amin'ny crack Hotspot Shield, azonao atao ny manalavitra ny sivana sy firewall ary mitsidika ireo tranonkala tadiavinao na aiza na aiza misy anao.
Adiresy IP miafina
Ny hackers, ny bandy IT nerdy na andrim-panjakana hafa dia afaka mitrandraka ny adiresy IP anao hitsikilo ny hetsika Internet na ny toerana misy anao. Satria manafina ny adiresy IP anao izy ireo dia azon'izy ireo atao ny mangalatra ny angona anao manokana toy ny antsipirian'ny carte de crédit, kaonty banky sns. Raha misintona ny Hotspot Shield ianao ary mampihetsika ny fampiharana dia azonao atao ny manafina ny dian-tongotrao amin'ny alàlan'ny fisafidianana toerana mpizara VPN hafa.
VPN manohitra ny malware
Tsy toy ny kinova Hotspot Shield Premium Crack, ny fanontana ofisialy dia manolotra tsy ny endri-piarovana VPN azo antoka ihany, fa manatsara be ihany koa ny fiarovana ny mpampiasa amin'ny malware. Ny fampiharana dia manara-maso ny tranokala ary mampahafantatra amin'ny mpampiasa iray fa tsy misy malware izany sehatra izany. Raha misy viriosy ao amin'ilay tranonkala dia sakanan'ny fampiharana azy io, ka manakana ny fitaovanao tsy harary.
Fanamafisana ny fiarovana an-tserasera
Ny Hotspot Shield Crack dia mamela ny mpampiasa hahatsapa ho voaro rehefa mitety Internet. Satria ny serivisy dia manome encryption matanjaka sy fiarovana hafa, azonao antoka fa ny data-nao manokana miaraka amin'ny antsipirian'ny carte de crédit, ny kaonty amin'ny Internet ary ny teny miafinao dia azo antoka.
Windows Microsoft Windows 7 na taty aoriana
Mac OS Mac OS 10.12 "Sierra" na taty aoriana
Android Android 5.0 "Lollipop" na avy eo
iOS iOS 10.1 na taty aoriana
Filename: HotspotShield-9.8.5-tsotra-773-plain.exe (download)